Ny miseho ao anaty vata-fampangatsiahana rehefa akatona izy - Vaovao farany
Home / fanadihadiana / mafana / réfrigérateur / teknolojia / Ny miseho ao anaty vata-fampangatsiahana rehefa akatona izy
Efa ela ve ianao no te hahalala hoe inona no miseho ao anatin'ny vata fampangatsiahana na "réfrigérateur" rehefa akatona ny varavarany? Ankehitriny dia tanteraka izany.
Tanora anglisy anankiray no nanana ny hevitra mati-paika hametraka "caméra" tao anatin'ny vata-fampangatsiahana ao an-tranony. Rehefa nakatony ny varavaran'ity farany dia afaka naka sary avy lavitra izy. Ny sary nivoaka dia tena mampitolagaga tokoa.
Amin'ny sary rehetra azo dia tsy misy zavatra hita na iray aza. Betsaka ny anton'izany fa ny tena manan-danja indrindra dia ny tsy fisian'ny fahazavana intsony rehefa mikatona ny varavarana. Rehefa tsy eo ilay jiro kely hita rehefa misokatra ny varavarana, dia maizina tanteraka ao anaty vata-fampangatsiahana, mety mihoatra izay aza.
Eto dia tsy misy zavatra hita amin'ny sary 30 isa nofantininay, ny sary tsara indrindra tamin'ireo nalainy no asehonay eto. «Tena mahagaga, ireto sary ireto dia mampiditra tanteraka amin'ny tontolo anaty vata-fampangatsiahana, toa injay fa heno mibitsika ny feon'ny angovo izay manaparitraka tsikelikely ny hatsiaka.» hoy ity tanora anglisy manazava ny sary. «Nahaliana ahy hatramin'izay ny tontolon'ny tsy hita maso, ireo izay takon'ny teknolojia», hoy izy.
Rehefa tsy eo ilay jiro kely hita rehefa misokatra ny varavarana, dia maizina tanteraka ao anaty vata-fampangatsiahana, mety mihoatra izay aza.
«Nahaliana ahy hatramin'izay ny tontolon'ny tsy hita maso, ireo izay takon'ny teknolojia»
«Tena mahagaga, ireto sary ireto dia mampiditra tanteraka amin'ny tontolo anaty vata-fampangatsiahana, toa injay fa heno mibitsika ny feon'ny angovo izay manaparitraka tsikelikely ny hatsiaka.»
Sary hafa mampiseho fa tsy misy inon'inona hita na dia manatona akaiky kely aza isika.
Mbola sary hafa koa.
Vao maika maizina kokoa ny sary manaraka.
Ity sary mampiseho ny anatin'ny vata-fampangatsiahana ity dia mampieritreritra antsika mikasika ny hiafaràn'ny zanak'olombelona.
Mahatsapa fiovàna amin'ny tsy fisian'ny hazavàna ve ny zavatra ao anaty vata-fampangatsiahana? Mbola tsy voavalin'ny mpandinika sy filôzôfy tafaresaka taminay io fanontaniana io.
Mikasa hamerina ny fanandramany ity tovolahy ity fa raha "caméra" tsotra no nampiasainy teo aloha dia mety hampiasa caméra afaka mahita amin'ny maizina izy amin'ny manaraka mba ahafahany mahita na dia maizina aza ao anaty vata-fampangatsiahana mikatona.
Ny miseho ao anaty vata-fampangatsiahana rehefa akatona izy Reviewed on octobre 21, 2014 Rating: 5
fanadihadiana X mafana X réfrigérateur X teknolojia